स्विडिश संगीतकार अलेक्जेन्डर Bard: जीवनी, रचनात्मकता र व्यक्तिगत जीवन
अलेक्जेन्डर Bard - प्रेमीहरू को ब्यान्ड सेना, को 90 को दशक मा लोकप्रिय को गायक। आफ्नो जीवनी अझै पनि विभिन्न देशहरूमा बस्ने हजारौं को चासो छ। यो आलेख संगीतकार बारेमा व्यापक जानकारी छ।
जीवनी अलेक्जेन्डर Bard: परिवार र बाल्यकाल
उहाँले VERKTYG र को स्वीडिश सहरमा मार्च 17, 1961 जन्म भएको थियो। के परिवार मा म हाम्रो नायक खडा? आफ्नो आमाबाबु संगीत कुनै सम्बन्ध थियो। आमा अलेक्जेन्डर (बारबरा) स्कूल मा एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर बुबा, जोए Bard, एउटा सानो फर्म को मालिक थियो।
Aleksandr ros सक्रिय र स्वतन्त्र केटा। उमेर7मा, उहाँले एक हुर्किसकेका मानिस, एउटा वास्तविक मानिसको रूपमा आफूलाई को लाग्यो। सामान्य र संगीत - केटा तुरुन्तै दुई विद्यालय गए। आफ्नो स्वतन्त्र समयमा Aleksandr Bard एक डिस्को गर्न साथीहरूसँग भयो। पनि त त्यो बालिका संग सम्बन्ध थियो।
हाम्रो नायक 8 वर्षको हुँदा, आफ्नो परिवार स्टकहोम को एक छेउछाउको सारियो। केटा नयाँ मित्र बनाएको। तर नयाँ ठाउँमा जीवन, अलेक्जेन्डर रुचि थिएन। 15 वर्ष मा उनी र उनको 18 वर्षीया प्रेमिका स्टकहोम सारियो। जवान दम्पतीले शहर को सुत्ने क्षेत्रमा मध्ये एक ठूलो अपार्टमेन्ट भाडामा लियो। यो 12 को उमेर मा, अलेक्जेन्डर आफ्नो bisexuality बुझे कि टिप्पण लायक छ। उहाँले मन पराएका, र बालिका र केटाहरु। यो अझै पनि बाँकी थियो।
मान्छे आफूलाई र आफ्नो प्रिय लागि एक सभ्य जीवन सुनिश्चित गर्न धेरै गाह्रो काम थियो। 15 वर्ष मा, साशा INTERRAITICKET सबै युरोप भन्दा यात्रा। एक वर्ष पछि उहाँले एम्स्टर्डम को रेकर्डिङ स्टुडियो को एक साथ काम गर्न थालिन्।
धेरै वर्ष मानिस उहाँले नाटक स्कूलमा अध्ययन जहाँ लस एन्जलस, बस्थे। केही बिन्दुमा तिनले पूजाहारी बन्न निर्णय, तर आफ्नो मन परिवर्तन भयो। अलेक्जेन्डर गए ओहियो। हाम्रो नायक मा एक डिग्री संग विश्वविद्यालय स्नातक "अर्थशास्त्र र भूगोल।"
प्रारम्भिक 1980 को दशक मा, त्यो बार्बी गुडिया को छविमा समलिङ्गी क्लब मा देखियो। उहाँले स्थानीय दर्शक लोकप्रिय थियो।
प्रेमीहरू समूह सेना
1987 अघि अलेक्जेन्डर, Kamilla Henemark र जीन-पियरे BARDA सामूहिक बार्बी रूपमा प्रदर्शन गरे। तिनीहरूले ज्ञात र स्वीडिश दर्शक द्वारा प्रेम छन्। र मान्छे समूह को छवि, साथै यसको नाम परिवर्तन गर्न चाहन्थे। प्रेमीहरू को सेना को विकल्प, एउटै चलचित्र हेरेपछि अलेक्जेन्डर को टाउको आउँछन्। फिलिम "प्रेमीहरू को सेना" अलेक्जेन्डर महान् आदेश अन्तर्गत सेना मा समलिङ्गीहरूले को विषय मा।
Michaela डे ला Cour र डोमिनिक Peczynski - दुई सुन्दर बालिका अद्यावधिक समूहमा अपनाए थिए। प्रेमीहरू को सेना को debut एल्बम अगस्ट 1990 मा जारी भएको थियो। उहाँले डिस्को Extravaganza भनिन्छ।
आफ्नो क्यारियर दौरान, दल, पाँच स्टूडियो एल्बम जारी धेरै संगीत भिडियोहरूमा तारा अङ्कित र संगीत सयौं दिनुभएको छ। प्रेमीहरू को सेना को soloists द्वारा प्रदर्शन 20 भन्दा बढी गीतहरू, शीर्ष दस Evrocharta प्रविष्ट गर्नुभयो। यस्तो रचनाहरूको र obsession लैंगिक क्रान्ति, हिट भएका छन्।
1996 मा, प्रेमीहरू को टोली सेना अवस्थित भएनन् छ। तर अलेक्जेन्डर Bard चरण छोडनेछैनँ थियो। आफ्नो नयाँ brainchild को भयो समूह वैक्यूम। आफ्नो दोस्रो एल्बम को रिलीज पछि, हाम्रो नायक यसको संरचना बाँकी छ। तथापि, उहाँले एक निर्माता रह्यो।
1999 मा, Bard सार्वजनिक नृत्य-पप परियोजना Alcazar प्रस्तुत। पहिलो एकल समूह (शाइन मा) युरोपेली विद्यार्थी बीच ठूलो लोकप्रियता जित्यो।
अलेक्जेन्डर Bard: प्रेम जीवन
स्विडिश संगीतकार उहाँले मानिसहरू मनपराएका भन्ने तथ्यलाई लुकाउन छैन। प्रेमीहरू को सेना को लोकप्रियता को समयमा, उहाँले पन्जा रूपमा यौन साझेदार परिवर्तन भयो। यस मामला मा, Bard एड्स फसाउन आत्तिनुपर्ने थियो। तसर्थ, ध्यान दिएर व्यक्तिगत स्वच्छता हेर्दै।
40 वर्ष चिन्ह उच्चकोटीको, अलेक्जेन्डर सम्बन्ध एउटा थप गम्भीर दृष्टिकोण भयो। उहाँले प्रिय देखियो। सँगै तिनीहरूले जीवन सुसज्जित। तर, नाम र Bard चुनिएको गतिविधिको प्रकार disclosed थिएनन्।
धेरै प्रशंसक अलेक्जेन्डर जीवन कसरी जान्न चाहन्छु। गरेको उनले संगीत विदाई भने छैन भन्ने तथ्यलाई सुरु गरौँ। अंगहरु बिना निकायहरु - 2004 मा, Bard नयाँ परियोजना शुरू भएको छ। तर, टोलीमा लामो पछिल्लो थिएन।
2009 मा, हाम्रो नायक Gravitonas समूह सिर्जना गरियो। सिन्थपप भनिन्छ मान्छे रोजगार जो विधा। यो विद्युतीय संगीत एक प्रकारको छ। Gravitonas समूह ज्ञात र मात्र होइन स्वीडेन तर पनि धेरै युरोपेली देशहरूमा र संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रेम छ।
अलेक्जेन्डर Bard (फोटो सेमी। माथि) नै सफल व्यवसायी कल गर्न सक्नुहुन्छ। मिति, उहाँले एक रेकर्डिङ स्टुडियो स्टकहोम रेकर्ड र इन्टरनेट कम्पनीहरु को सह-मालिक छ।
अलेक्जेन्डर Bard - आफ्नो क्षेत्रमा एक साँचो पेशेवर। मेहनत र ठूलो प्रतिभा मार्फत उनले संगीत मा धेरै हाइट्स हासिल गरेको छ। हामी उसलाई काम र खुसी व्यक्तिगत जीवनमा हरेक सफलता चाहनुहुन्छ!
Rammstein Discography। इतिहास र समूह फोटो
जुआन डिएगो Flórez, को पेरू ओपेरा गायक: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
बच्चा सबैभन्दा साधारण छाला रोग
कसरी अनाज को मद्दतले वजन गर्न? यस्तो आहार कि शरीर को लागि सुरक्षित छ?
आइसक्रिम र कसरी यो खाना पकाउनु संग कफी को नाम के हो?
"Proteflazid": निर्देशन। "Proteflazid": समीक्षा, मूल्य
साम्राज्य KARLA Velikogo पतन: मिति। साम्राज्य KARLA Velikogo पतन: निहितार्थ
घाम क्रेते - जहाँ होटल एक अविस्मरणीय छुट्टी लागि आमन्त्रित गरिएको छ एक द्वीप!